Banyere Anyị - Hangzhou Jinding Aluminium Co., Ltd
Aluminum Alloy Ingot nhazi Equipment
Aluminum Nkedo Ọkụ
Guoxin Aluminium, a ngwaahịa ụlọ ọrụ na China, pụrụ iche na-eme ka elu ike na elu kpọmkwem aluminum alloy ngwaahịa, gụnyere aluminum alloy ọjà, aluminum alloy Ogwe na mkpara, aluminum alloy profaịlụ kemgbe 2006, na nhọrọ nke 1000 series, 2000 series, 3000 usoro, 4000 series, 5000 series, 6000 usoro na 7000 usoro aluminum alloy etinyere dị ka ụgbọelu bughi akụkụ, ugbo elu engine akụkụ, mgbali arịa, wdg Ruo ugbu a, Guoxin Aluminium bụ kasị super ike aluminum alloy nhazi isi ke China, na a ngụkọta isi obodo nke 1380 nde RMB (fọrọ nke nta ka 207 nde USD), na aha obodo na-354 nde RMB (fọrọ nke nta 53 nde USD)
Anyị Aluminium Alloy nhazi Equipment
Guoxin factory bụ banyere 106 puku square mita, nke e nwere na nhazi akụrụngwa, dị ka kwụ haịdrọlik pịa, 100MN, 75MN abụọ-edinam kpọmkwem extrusion pịa, 55MN, 36MN otu-edinam kpọmkwem extrusion pịa, 55MN, 28MN abụọ -action anọ extrusion pịa, 2600USTon, 2100USTon otu-edinam kpọmkwem extrusion pịa, 1880USTon, 1100USTon abụọ-edinam kpọmkwem extrusion pịa. Otu n'ime ndị a, ndị 55MN, 28MN abụọ-edinam anọ extrusion pịa a n'ụzọ zuru ezu mere SMS Siemag. Ọ bụ eru na extruding aluminum alloy ọkpọkọ na a dayameta nke 50-520mm, na profaịlụ na ihe acreage nke 4 ~ 418cm2. Anyị elu-nkenke oyi nhazi akụrụngwa na-agụnye 20MN, 10MN, 6MN gbatia imezi igwe, 120t, 30t, 10t ịbịaru igwe, na LG90-H, LG60-H, LG30-H usoro oyi Rolling na nkume igwe nri.
Anyị Testing Equipment
Guoxin nwere Central laabu maka Usoro mmepe, nke e enyocha dị ka Qinghai Engineering na Technology Center, na zuru ezu tent nke ule ngwá, gụnyere ngwa anya emission spectroscopy na plasma spectrometer si America, ndị atọm absorption spectrophotometer si England, na metallographic mikroskopu na image analyzer si Carl Zeiss, na eluigwe na ala tester si Shimadzu, na cross-ngalaba n'ihe usoro si Israel. Anyị lab center anyị nwere ike na-eduzi chemical mejupụtara analysis maka aluminum alloy akpa na Ogwe, ime microstructure nnyocha, na n'ibu Njirimara ule. N'aka nke ọzọ na a lab center anyị pụrụ ịzụlite ọhụrụ aluminum alloy ngwaahịa igbo mkpa site na iji ọhụrụ nhazi usoro.
Guoxin Aluminium, emi odude ke Qinghai, anyị gburugburu, e nwere Tianjin Port, Lianyungang Port, Qingdao Port, Shanghai Port nso anyị ụlọ ọrụ maka adaba njem na zuru ụwa ọnụ ahịa. N'ihi na ndị ahịa ndị na-achọ ịzụta elu àgwà aluminum alloy ngwaahịa n'ihi na ụfọdụ ojiji si China, anyị ụlọ ọrụ na-anabata unu na-atụ anya ka gị na imekọ ihe ọnụ.
Iwusi nkà na ụzụ ọhụrụ an ...